Sakafo ambany kaloria 900 kaloria | Nutri Diet
Ancaro | | Vatsim-pivelomana, fahasalamana
Ity dia fihinanana hypocalorika natao ho an'ireo olona rehetra mila mampihatra drafitra fihenan-danja na fomba fikojakojana, drafitra tena tsotra hotanterahina. Ankehitriny, raha ataonao hentitra izany dia hamela anao ho very 2 kilao ao anatin'ny 8 andro monja.
Raha tapa-kevitra ny hampihatra an'ity sakafo ity ianao dia tokony hanana fahasalamana ara-pahasalamana, misotro rano betsaka araka izay azo atao isan'andro, mamy ny fampidiranao amin'ny zava-mamy ary manaova sira sy menaka oliva anao. Tsy maintsy averinao ny menio voatanisa etsy ambany isan'andro isan'andro anaovanao ny sakafo.
1 Menio isan'andro
2 Iza no tsy maintsy mihinana sakafo kaloria 900?
3 Firy ny kilao very anao?
4 Menu isan-kerinandro
5 Torohevitra manokana
6 Toro lalana hanatanterahana an'io sakafo hypocalority io
Sakafo maraina: fampidirana 1 safidinao, voankazo voasary 1 ary toast 1 aparitaka amin'ny fromazy maivana.
Mamatonalina: yaourt kely matavy 1.
Sakafo atoandro: 150g. akoho na trondro, salady mifangaro 1 ary voankazo 1.
Ny folak'andro tolakandro: fampidirana 1 safidinao ary 50g. fromazy skim.
Sakafo maivana: fampidirana 1 safidinao, voankazo voasary 1 ary toast 1 aparitaka amina fako kely.
Sakafo hariva: 100g. ny hena, lasopy legioma ary fampidirana 1. Afaka mihinana ny habetsaky ny lasopy tadiavinao ianao.
Etsy ambany no hahitanao menio isan-kerinandro hanaovana sakafo kaloria 900.
Iza no tsy maintsy mihinana sakafo kaloria 900?
Momba izany sakafo somary henjana, satria tsy manome afa-tsy kaloria 900 isan'andro isika. Izay ambany fatra ary toy izany dia tsy atolotra ho an'ny olona manao fanatanjahan-tena mafy. Noho izany dia azonao atao daholo ireo salama salama ary manana gadona fiainana milamina kokoa. Raha tsy izany dia hahatsapa ho tsy misy angovo izy ireo ary mety ho mankaleo mandritra ny andro. Raha arahana amin'ny taratasy dia sakafo mahomby izay mamela antsika hihena haingana sy ao anatin'ny fotoana fohy. Noho izany, raha te-hanary kilao vitsivitsy ianao amin'ny fotoana firaketana ary salama ianao, dia afaka mifidy an'ity sakafo ity ianao.
Firy ny kilao very anao?
Miaraka amin'ny sakafo kaloria 900 azonao tratrarina very kilao mihoatra ny roa kilao isan-kerinandro. Marina fa tsy azo omena tarehimarika marina, satria tsy hitovy amin'ny olona tsirairay. Raha, ankoatry ny sakafo, dia manampy amin'ny fanaovana fanatanjahan-tena kely isika, na dia tsy dia mahery aza, dia afaka mihoatra ny telo kilao sy sasany isan-kerinandro isika. Ity karazan-tsakafo ity dia tsy ilaina mba hampitomboana azy ireo amin'ny fotoana be, fa kosa hanandrana hanohy mihinana amin'ny fomba voalanjalanja mba hialana amin'ny vokadratsy.
Sakafo maraina: ranom-boasary natoraly miaraka amin'ny mofo varimbazaha 30 grama sy fromazy vaovao.
Mamatonalina: Voankazo iray - 200 grama
Sakafo: trondro 125 grama misy broccoli 120 grama
Snack: yaourt skimmed
Sakafo hariva: omelette fotsy atody sy crème legioma namboarina. Ho an'ny tsindrin-tsakafo, yaorta voajanahary
Sakafo maraina: fampidirana mofo 35 grama amin'ny varimbazaha manontolo ary vorontsiloza na akoho telo hena
Mamatonalina: yaourt ambany tavy
Sakafo atoandro: akoho masaka na masaka 150 grama, miaraka amin'ny salady voatabia, salady sy tongolo
Snack: yaorta voajanahary na ranom-boasary
Sakafo hariva: legioma voaendy 200 grama misy hena turkey na hena akoho 100 grama
Sakafo maraina: kafe irery na misy ronono an-tsokosoko, mofo varimbazaha 30 grama manontolo sy marmalade iray sotro tsy misy siramamy
Mamatonalina: voankazo 200 grama
Sakafo: trondro 125 grama misy legioma 250 grama, araka ny safidinao
Snack: mofo grama 30 grama feno fromazy manaparitaka tavy 0%
Sakafo hariva: udila 150 grama misy holatra 125 grama sy yaourt voajanahary.
Sakafo maraina: voamaina 30 grama miaraka amin'ny yaourt voajanahary
Sakafo: turkey 150 grama miaraka amin'ny legioma
Snack: ranom-boasary iray vera
Sakafo hariva: voaroy miaraka amin'ny fromazy nokapohina na fromazy maivana ary ampahan'ny voankazo iray
Sakafo maraina: mofo voadio 30 grama miaraka amina tapa-kazo Serrano
Sakafo atoandro: trondro 200 grama sy salady voatabia sy kôkômbra
Snack: yaorta voajanahary
Sakafo hariva: akoho na turkey 150 grama misy episy sy yaourt
Sakafo maraina: sombi-mofo iray, misy fromazy Burgos ary fampidirana na kafe misy ronono mihintsy.
Sakafo: steak hen'omby miaraka amin'ny broccoli
Snack: sombi-mofo misy turkey 4 voadidy
Sakafo hariva: trondro 150 grama toy ny ranomasina miaraka amina chard na spinach 100 grama ary yaourt voajanahary.
Sakafo maraina: ranom-boankazo, voamaina 30 grama ary fromazy vaovao
Mamatonalina: Sombin-mofo vita amin'ny varimbazaha miaraka amina akoho
Sakafo: paty grama 40 grama misy turkey voatono 125 grama sy salady lovia iray.
Snack: ranom-boankazo na voankazo 250 ml
Sakafo hariva: kapoakan'ny tuna voajanahary miaraka amin'ny omelette frantsay misy atody iray sy fotsy roa. Miaraka amin'ny tsaramaso maintso vitsivitsy.
Rehefa manamboatra sakafo toy ny hena na trondro dia tsara kokoa ny mampiasa menaka oliva iray sotro fihinanana rehefa sakafo atoandro ary iray hafa amin'ny sakafo hariva. Mba hanampiana tsiro sasany, dia tsara foana fa tsy mampiasa sira na saosy isika fa mampiditra zava-manitra. Satria hanampy tsiro izy ireo fa tsy kaloria. Etsy ankilany dia mila misotroa rano be, koa amin'ny endrika infusions mandritra ny andro. Litatra sy sasany no hanampy antsika hanafoana ny poizina sy hanadio ny vatana.
Tokony hitandrina ny taratasy ny sakafo dimy izay noresahinay. Marina fa azontsika atao ny manova legioma na akoho ho an'ny vorontsiloza na miovaova isan-karazany amin'ny karazan-trondro ananantsika. Fa amina vola be araka ny nanolorana anao ho afaka hanaraka ny sakafo 900 kaloria. Raha ny momba ny fandrahoan-tsakafo naroso dia aleony foana ny lafaoro, ny etona na ny endasina.
Toro lalana hanatanterahana an'io sakafo hypocalority io
Voalohany indrindra dia tokony hanana antony manosika tsara isika. Mba hanaovana izany, dia ny hieritreretana ny tanjontsika ary hanampiana ny finiavana amin'izany, satria tratra izany. Raha vantany vao mahita ny valiny voalohany, dia hihinana tsara kokoa ny sakafo kaloria 900.
Miezaha hanao fanatanjahan-tena, fa aza atao be loatra. Ny mandeha mitsangatsangana dia mety ho iray amin'ireo mahasoa indrindra.
Sorohy ny sakafo mamy na matavy amin'ny fotoana rehetra. Rehefa manana fotoana malemy ianao dia tsara kokoa hatrany ny manisy fampidirana na voankazo feno rano toy ny sombin-watermelon na frezy vitsivitsy.
Toy izany koa no hanadinoantsika ireo zava-pisotro misy alikaola na ireo izay be siramamy. Ny zavatra tsara indrindra dia ny misafidy voankazo na manao ranom-boankazo sy namboarina.
Indray mandeha isan-kerinandro dia afaka mampiditra hena mena ianao, na dia tsara kokoa noho ny turkey na akoho aza, ho an'ny proteinina ary koa ho an'ny atiny ambany tavy.
Raha reraky ny henan'akoho na vorontsiloza foana ianao dia afaka manampy lentilisa vitsivitsy ihany ary manamboatra lovia iray amin'ireo miaraka amin'ny legioma. Manome proteinina antsika izy ireo miaraka amin'ny fibre sy vitamina hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » Vatsim-pivelomana » Sakafo ambany kaloria 900 kaloria
anlivi23 dia hoy izy:
Manana hypothyroidism aho ary tsy mihinana yaourt, inona no karazany ao
Manomboka amin'ny masaka ka hatramin'ny voanjo: ny fomba fihinanana atody mahasalama indrindra
Croquette lova iberiana